Waxay igu kaliftay inaan bilaabo inaan ka fikiro waxyaabaha ku kalifay suuqleyda inay baxaan. Waxaan maalmahan aad ugu xirnayn warbaahinta dhijitaalka ah qiimaha jaban iyo awoodaha tiknoolajiyadda oo aan ilaawno in dadka badankood ay kaliya ku arkaan wixii aan ku qabannay qoraal iyo muuqaal. Haddii aan kor u qaadno darajo, waxaan ku sameyn karnaa fiidiyoow meeshii ay hadda awoodaan arki iyo maqashiin anaga Laakiin taasi weli waa kaliya 2 ka mid ah 5 dareen ee aan awoodno inaan gaarno.
Haddii aad rabto in aad kobci hoggaanka, Maaha oo kaliya ku dirida emayl kale sanduuqa ay ku jiraan. Waxaad ubaahantahay inaad gaarto hogaamintaas oo aad sameyso aragti haddii aad rabto inaad ku kaxeyso iyaga si aad uqaado talaabada xigta ee ku aadan wax iibsiga, dib u saxiixida heshiiska, ama kordhinta qarashka ay ku bixinayaan ururkaaga.
Sideed ku gaari kartaa dareenka intiisa kale - taabasho, ur, iyo dhadhamin - in laga tago raad raaga? Haddii aad isku magaalo joogto, waxaa laga yaabaa inay u fududahay sidaad u qaadan laheyd rajadaada ama macmiilkaaga si aad casho u aaddid. Laakiin qaar badan oo naga mid ahi waxay ka shaqeeyaan meel ka baxsan darawalnimada marka xulashooyinka ayaa xoogaa xaddidan. Waxaa laga yaabaa inaad yeelan karto badeecad caado ah oo la soo saaray ama nuqul daabacan oo qurux badan la soo saaray. Waxaa laga yaabaa inaad ku dari karto dhalo khamri ah ama macmacaan maxalli ah oo lagu soo diro boostada.